ဘဝမှာ ရှဆေ့ကျဘာလုပျရမှနျးမသိဘဲ့ လမျးပြောကျနတေဲ့သူတှေ ဖတျဖို့ - ONE DAILY MEDIA
လူတိုငျးက ရညျမှနျးခကျြကိုယျစီနဲ့ကွိုးစားနကွေတဲ့ အခြိနျမှာ ကိုယျတဈယောကျတညျး ဘဝကွီးကိုငွီးငှပွေီ့း ဘာလုပျလို့လုပျရမှနျးမသိ လမျးပြောကျနသေလိုမြိုး ဖွဈဖူးပါသလား?? ဒါဆိုရငျတော့ ဒီလိုအခြိနျဟာ ဘယျလောကျခကျခဲတယျဆိုတာ သငျကောငျးကောငျး နားလညျမှာပါ။ ဘာလုပျရမှနျးမသိ၊ ဘာမှလညျးမလုပျ ခငျြဘူးဆိုတဲ့စိတျမြိုးဖွဈနတေဲ့အခါမှာ ဒီအခကျြလေး တှကေို လုပျပေးမယျဆိုရငျ လမျးပြောကျနတေဲ့အခွအေနကေနေ ပွနျပွီးအဆငျပွလောမှာပါ။
၁။ သငျ့ကိုစိတျဖိစီးစတေဲ့ ပတျဝနျးကငျြကိုရှောငျပါ
ကိုယျတိုငျက ရှဆေ့ကျဘာလုပျရမယျမှနျးမသိ ရညျမှနျးခကျြပြောကျနခြေိနျမှာ စိတျဖိစီးမှုတှထေပျဖွဈလာမယျဆိုရငျ အခွအေနကေ ပိုဆိုးသှားပွီး ထဈခနဲရှိစိတျတိုဒေါသထှကျတတျတဲ့သူ တဈယောကျ ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီလိုဖွဈနပွေီဆိုရငျ ကိုယျ့ကိုစိတျဖိစီးစတေဲ့ပတျဝနျးကငျြကို ရှောငျပွီး တဈယောကျတညျးအေးအေးဆေးဆေး နနေိုငျအောငျကွိုးစားပါ။ ခရီး လေးဘာလေး ထှကျသငျ့ရငျထှကျပါ။ ခရီးမထှကျနိုငျဘူး၊ တဈယောကျတညျးနဖေို့လညျး အဆငျမပွဘေူးဆိုရငျတော့ ပိတျရကျ၊အားလပျရကျတှမှော တဈယောကျတညျး အေးအေးဆေးဆေးအပွငျထှကျလမျး လြှောကျတာ၊ လူရှငျးတဲ့ကျောဖီဆိုငျမှာထိုငျတာ၊ တိတျဆိတျတဲ့နရောလေးမှာ စာအုပျဖတျတာမြိုး လုပျပေးပါ။ ကိုယျ့ကို စိတျပြျောရှငျစတေဲ့သူတှေ နားမှာနပေါ။
သငျ့အနနေဲ့ ဒီလိုအခွအေနမှော ကိုယျဖွဈခငျြတာကို လုပျရမလား၊ ဖွဈသငျ့တာကိုပဲလုပျရမလားဆိုပွီး ဝခှေဲရခကျ၊ စဉျးစားရခကျနတေတျပါတယျ။ လကျရှိ သငျတှေးနတေဲ့ အတှေးတှအေားလုံးကိုခေါငျးထဲက ထုတျလိုကျပါ။ အခုအခြိနျမှာ သငျ့အနနေဲ့ သငျ့ကို စိတျပြျောရှငျစတေဲ့ အလုပျမြိုးကိုလုပျတာ အကောငျးဆုံးပါ။ သငျ့ကိုပြျောရှငျစတေဲ့အလုပျက ဘယျအရာဖွဈမလဲ စဉျးစားပါ။ အဲ့ဒီကမှ သငျနဲ့သငျ့တျောတဲ့အရာကို တှလေ့ာပါလိမျ့မယျ။
၃။ လှနျခဲ့တဲ့(၅)နှဈတုနျးက အခြိနျနဲ့အခုလကျရှိအခြိနျကို နှိုငျးယှဉျကွညျ့ပါ
စိတျဓာတျကနြတောပဲဖွဈဖွဈ၊ ရညျမှနျးခကျြပြောကျပွီး လမျးပြောကျနတောပဲဖွဈဖွဈ ဒီလိုအခွအေနမှော သငျ့အတှကျအကောငျးဆုံးက လှနျခဲ့တဲ့(၅)နှဈကသငျနဲ့ အခုလကျရှိသငျ့အနအေထားကို ယှဉျကွညျ့တာပါပဲ။ ဒီ(၅)နှဈအတှငျးမှာ ဘယျအရာတှတေိုးတကျလာသလဲ၊ ဘယျအရာတှဆေုတျယုတျသှားသလဲဆိုတာ ပွနျဆနျးစဈပါ။ တိုးတကျလာတဲ့အခကျြတှအေတှကျ ကိုယျ့ကိုယျကို ခြီးကြူးပါ။ ပွီးရငျ ဆုတျယုတျသှားတဲ့အခကျြတှကေို ပွုပွငျပါ။ ဒါက သငျ့ကိုစိတျဓာတျတကျကွှစပေါလိမျ့မယျ။
၄။ အလှနျအမငျး စိုးရိမျတတျတဲ့စိတျကိုပွုပွငျကွညျ့ပါ
ရညျမှနျးခကျြမရှိသလို လမျးပြောကျနတေယျဆိုတာ စိုးရိမျစိတျလှနျကဲခွငျးကတဆငျ့ ဖွဈပျေါလာတဲ့ အခွအေနေ တဈခုဖွဈပါတယျ။ စိုးရိမျစိတျလှနျကဲပွီးအတှေးလှနျခွငျးက သငျ့ကို ဘာမှမလုပျခငျြ၊မကိုငျခငျြဘဲ အရှုံးပေးခငျြစိတျကို ဖွဈစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အဲ့ဒီလို အလှနျအမငျးတှေးပူတတျတဲ့အကငျြ့၊ စိုးရိမျတတျတဲ့အကငျြ့ကိုပွငျကွညျ့ပါ။ ပွုပွငျရငျး အဖကျဖကျကအဆငျပွေ လာပါလိမျ့မယျ။
လူတိုင်းက ရည်မှန်းချက်ကိုယ်စီနဲ့ကြိုးစားနေကြတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ဘဝကြီးကိုငြီးငွေ့ပြီး ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိ လမ်းပျောက်နေသလိုမျိုး ဖြစ်ဖူးပါသလား?? ဒါဆိုရင်တော့ ဒီလိုအချိန်ဟာ ဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ သင်ကောင်းကောင်း နားလည်မှာပါ။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ၊ ဘာမှလည်းမလုပ် ချင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ ဒီအချက်လေး တွေကို လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် လမ်းပျောက်နေတဲ့အခြေအနေကနေ ပြန်ပြီးအဆင်ပြေလာမှာပါ။
၁။ သင့်ကိုစိတ်ဖိစီးစေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှောင်ပါ
ကိုယ်တိုင်က ရှေ့ဆက်ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းမသိ ရည်မှန်းချက်ပျောက်နေချိန်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေထပ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် အခြေအနေက ပိုဆိုးသွားပြီး ထစ်ခနဲရှိစိတ်တိုဒေါသထွက်တတ်တဲ့သူ တစ်ယောက် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုရင် ကိုယ့်ကိုစိတ်ဖိစီးစေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှောင်ပြီး တစ်ယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေး နေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ခရီး လေးဘာလေး ထွက်သင့်ရင်ထွက်ပါ။ ခရီးမထွက်နိုင်ဘူး၊ တစ်ယောက်တည်းနေဖို့လည်း အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ ပိတ်ရက်၊အားလပ်ရက်တွေမှာ တစ်ယောက်တည်း အေးအေးဆေးဆေးအပြင်ထွက်လမ်း လျှောက်တာ၊ လူရှင်းတဲ့ကော်ဖီဆိုင်မှာထိုင်တာ၊ တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာလေးမှာ စာအုပ်ဖတ်တာမျိုး လုပ်ပေးပါ။ ကိုယ့်ကို စိတ်ပျော်ရွှင်စေတဲ့သူတွေ နားမှာနေပါ။
သင့်အနေနဲ့ ဒီလိုအခြေအနေမှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို လုပ်ရမလား၊ ဖြစ်သင့်တာကိုပဲလုပ်ရမလားဆိုပြီး ဝေခွဲရခက်၊ စဉ်းစားရခက်နေတတ်ပါတယ်။ လက်ရှိ သင်တွေးနေတဲ့ အတွေးတွေအားလုံးကိုခေါင်းထဲက ထုတ်လိုက်ပါ။ အခုအချိန်မှာ သင့်အနေနဲ့ သင့်ကို စိတ်ပျော်ရွှင်စေတဲ့ အလုပ်မျိုးကိုလုပ်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ သင့်ကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့အလုပ်က ဘယ်အရာဖြစ်မလဲ စဉ်းစားပါ။ အဲ့ဒီကမှ သင်နဲ့သင့်တော်တဲ့အရာကို တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။
၃။ လွန်ခဲ့တဲ့(၅)နှစ်တုန်းက အချိန်နဲ့အခုလက်ရှိအချိန်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ
စိတ်ဓာတ်ကျနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရည်မှန်းချက်ပျောက်ပြီး လမ်းပျောက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုအခြေအနေမှာ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးက လွန်ခဲ့တဲ့(၅)နှစ်ကသင်နဲ့ အခုလက်ရှိသင့်အနေအထားကို ယှဉ်ကြည့်တာပါပဲ။ ဒီ(၅)နှစ်အတွင်းမှာ ဘယ်အရာတွေတိုးတက်လာသလဲ၊ ဘယ်အရာတွေဆုတ်ယုတ်သွားသလဲဆိုတာ ပြန်ဆန်းစစ်ပါ။ တိုးတက်လာတဲ့အချက်တွေအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချီးကျူးပါ။ ပြီးရင် ဆုတ်ယုတ်သွားတဲ့အချက်တွေကို ပြုပြင်ပါ။ ဒါက သင့်ကိုစိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေပါလိမ့်မယ်။
၄။ အလွန်အမင်း စိုးရိမ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ကြည့်ပါ
ရည်မှန်းချက်မရှိသလို လမ်းပျောက်နေတယ်ဆိုတာ စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲခြင်းကတဆင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲပြီးအတွေးလွန်ခြင်းက သင့်ကို ဘာမှမလုပ်ချင်၊မကိုင်ချင်ဘဲ အရှုံးပေးချင်စိတ်ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲ့ဒီလို အလွန်အမင်းတွေးပူတတ်တဲ့အကျင့်၊ စိုးရိမ်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ကြည့်ပါ။ ပြုပြင်ရင်း အဖက်ဖက်ကအဆင်ပြေ လာပါလိမ့်မယ်။